इंडिकोलिट राम्रो नीलो टूमलाइन। नयाँ अपडेट २०२१। भिडियो
इंडिकोलिट नीलो रंग टूमलाइन पत्थर अर्थ र मूल्य।
हाम्रो पसलमा प्राकृतिक इन्डोलाइट किन्नुहोस्
इन्डिकोलाइट टुरमेललाइन समूहको हरी र color विविधता निलो बनाउन दुर्लभ हल्का निलो हो। यो ईन्डिगो रंगबाट आएको हो।
इंडिकोलाईट टूमलाइन अर्थ र उपचार गुणहरू लाभ
निलो टूमलाइन चक्रहरू
ईन्डोलाइट टुरमेललाइन कुन रंग हो?
इण्डोलाईट केको लागि प्रयोग गरिन्छ?
स indic्केतको मूल्य के हो?
Tourmaline एक क्रिस्टललाइन बोरन सिलिकेट खनिज हो। केही ट्रेस तत्वहरू एल्युमिनियम, फलाम, मेग्नेशियम, सोडियम, लिथियम वा पोटेशियम हुन्छन्। वर्गीकरण अर्द्ध बहुमूल्य रत्न हो। यो रंगहरु को एक विस्तृत विविधता मा आउँछ।
मद्रास तमिल लेक्सिकनका अनुसार यो नाम सिंहली शब्द “थोरामल्ली” बाट आएको हो। श्रीलंकामा रत्नहरूको समूह भेटियो। उही स्रोतको अनुसार, तमिल "टुवारा-मल्ली" सिंहली जड़ शब्दबाट आएको हो। यो व्युत्पत्ति अक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश सहित अन्य मानक शब्दकोशबाट पनि आउँदछ।
चम्किलो रंगको श्रीलंकाको मणि टोरमालिन्स युरोपमा ल्याइएको थियो। डच ईस्ट इण्डिया कम्पनीले ठूलो मात्रामा। साथै, जिज्ञासा र रत्नहरूको लागि मांग पूरा गर्न। त्यस समयमा हामीलाई थाहा थिएन कि स्कोरल र टुरमेललाइन पनि समान खनिज हो। अर्को, यो केवल १1703०19 को बारेमा मात्र थाहा भयो कि केहि र colored्गका रत्नहरू zircons होइनन्। यसबाहेक, कहिलेकाँही ढु stones्गालाई "सिलोनी म्याग्नेट" पनि भनिन्थ्यो। किनभने यसले पियरोइलेक्ट्रिक गुणहरूको कारणले तातो खरानी आकर्षित र फेर्न सक्दछ। १ th औं शताब्दीमा, रसायनविद्हरूले रत्नको सतहमा किरणहरू हालेर टुर्मालाइन क्रिस्टलहरूले प्रकाशलाई ध्रुवीकरण गरे।
इंदिरा रङ पहेंलो निलो नजिकको गहिरो र धनी रंग हो। साथै अल्ट्रामारिनको केहि संस्करणहरू। यो पारंपरिक रूप देखि दृश्य स्पेक्ट्रम मा रंग को रूप मा वर्गीकृत छ। साथ ही इंद्रधनुष को सात रंगहरु मध्ये एक। बैंगनी र निलो बीचको रङ। तथापि, स्रोतहरू विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रममा यसको वास्तविक स्थितिको रूपमा भिन्न हुन्छन्।
रंग र name्ग इंडिगो बिरुवा इन्डिगोफेरा टिन्क्टोरियाबाट इंडिगो डाईबाट आउँदछ। र सम्बन्धित प्रजातिहरू।
अंग्रेजीमा रंगीन नामको रूपमा पहिलो पटक रेकर्ड गरिएको प्रयोग 1289 मा थियो।
इंडिगो रंगको बारेमा अधिक गठनमा
इंडिकोलिट टूमलाइन ढु stone्गाको अर्थ थाइमस, पिट्युटरी, र थाइरोइड ग्रंथिहरूलाई सन्तुलनमा राख्छ। जब यो क्रिस्टलको निको पार्ने उर्जाहरूको कुरा आउँछ, तिनीहरू माइग्रेन र टाउको दुखाइले गर्दा हुने पीडाहरू लाई कम गर्न मद्दत गर्छन्। वास्तवमा यो क्रिस्टलले आँखाका बिरामीहरूको उपचारमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।
घाँटी र तेस्रो नेत्र चक्रको क्रिस्टल, नीलो टूमलाइन, विशेष गरी गाढा छायाँमा, अन्तर्ज्ञानको उच्च स्तरमा पहुँच बढाउँदछ र प्रलोभन, दाबी, स्पष्टता, भविष्यवाणी, र आत्मा संचारको मनोवैज्ञानिक उपहार प्रदान गर्दछ। यो च्यानल वा माध्यम बन्न चाहनेहरूका लागि अत्यधिक लाभदायक छ, र अन्य क्षेत्रहरूबाट प्राप्त छापहरूलाई प्रशोधन गर्न र उनीहरूलाई मौखिक संचारको माध्यमबाट प्रवाह गर्न अनुमति दिन सहयोग गर्दछ।
इंडिकोलिटहरू प्रकाशदेखि गाढा संतृप्त नीलो रंगसम्म हुन्छ। यद्यपि र color्ग ग्रेडिंग एक न्याय कल हो, धेरै टोरमालाईन नीलोको रूपमा बेचिन्छ। एउटा इन्डोलाइट कुनै पनि छाया वा र be हुन सक्दछ जबसम्म निलो रंगको हिसाबले हुन्छ।
सूचक अर्थ। ढु stone्गा श्वासप्रश्वास र पाचन प्रणाली बिरामीहरूको उपचारमा मद्दतको रूपमा परिचित छ। यसले पिट्युटरी, थाइरोइड र थाइमस ग्रंथिलाई पनि सन्तुलनमा राख्न सक्छ। इण्डिकोलाइट क्रिस्टलको निको पार्ने उर्जाले आँखा विकारहरूको उपचार गर्न र टाउको दुख्ने र माइग्रेनको साथ हुने दुखाइलाई कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
विविधता र गुणवत्तामा निर्भर गर्दै टूमलाइनको मूल्यहरू एकदम भिन्न हुन्छन्। सब भन्दा महँगो प्याराबा टुरमालाईन हो, जुन प्रति क्यारेट हजारौं डलरमा पुग्न सक्छ। क्रोम टोरमाइलाइन्स, रुबेलिटहरू र राम्रो ईन्डोलाइट टुरमेललाइन मूल्य र द्वि-रंगहरू प्रति क्यारेटको रूपमा प्रति अमेरिकी १००० अमेरिकी डलरमा बेच्न सक्दछन्। अथवा धेरै। अन्य प्रजातिहरू प्रति क्याराट $० $ देखि 1000० $ अमेरिकी बीचको मूल्यका लागि उपलब्ध छन्, र ofको समृद्धिमा निर्भर रहन्छ।
प्राकृतिक रत्न हाम्रो रत्नको पसलमा बिक्रीको लागि
हामी रिंग, हार, झुम्का, पेंडेंटको रूपमा ईन्डिकोलाइटको साथ अनुकूलन गहनेहरू बनाउँछौं हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस उद्धरण को लागी।
इङ्कुकोट 0.42 सीटी
इङ्कुकोट 0.51 सीटी
इङ्कुकोट 1.49 सीटी
इङ्कुकोट 1.65 सीटी
इङ्कुकोट 0.64 सीटी
इङ्कुकोट 0.79 सीटी
इङ्कुकोट 1.09 सीटी
इङ्कुकोट 1.46 सीटी